भारतिय ज्वाई र नेपाली चेलीले परिवारलाई सम्झेर रुदै नेपाल छाडे ! - समृद्ध नेपाल
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोलाकर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि मोबाइल र इन्टरनेटमा विशेष छूट दिने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताका लागि मोबाइल र इन्टरनेटमा विशेष छूट दिने विशेष घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम
र बजेटका लागि सांसदहरुबाट सुझाव संकलन गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विकासका हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको भन्दै उनले त्यस क्षेत्रलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गरिने उनको भनाई थियो । ‘दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष छूट उपलब्ध गराउने छौं
उनले भने ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनका लागि स्थापना गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम त्यसका लागि प्रयोग गरिनेछ ।’त्यस बाहेक सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायीत्वको रुपमा समेत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री गुरुङको तयारी छ । उनले अगाडि भने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सीएसआरको रुपमा समेत
विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौं ।ता कि त्यस क्षेत्रका जनता दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् । प्रविधिमा पछि पर्न नपरोस् । सेवाप्रदायकहरुले अब जनसंख्याको आधारमा मात्रै होइन भूगोलको आधारमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यविधिहरुमा समेत आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।
४ सय ५० वटा ग्यास सिलिण्डर बोकेको ट्रक विस्फोट , अढाई घण्टासम्म सिलिन्डर पड्किए !
संयुक्त आन्दोलन गरौं, ओलीले एक हप्तामा घुँडा टेक्छन् : डा. बाबुराम भट्टराई
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी झलनाथ खनाललाई भेट्न डल्लुमा !
७२ सालको महाभुकम्पमा धरहराबाट खसेर बाँचेकी रमिला, गहभरि आँशु पार्दै यस्तो भन्छिन् !
काठमाडाैँ र अासपासमा बिहानै भूकम्पकाे धक्का महसुस !!
एसोसियट केन्द्रीय सदस्यमा गठबन्धनका कार्की र स्वतन्त्रबाट भट्टराई विजयी !
दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! कर्तुत थाहापाउदा सबैको होस उड्यो !
छोरा बुहारीको रमित हेर्न ? सासुले आफ्नै कोठामा लगाइन सीसीटीभीको मोनिटर !
करिश्मा पुनमगर बचाऊ अभियान ! सकेको सहयोग गर्न सबैमा अपिल !
नेपाललाई भारतले हेप्ने प्रमुख कारण पढ्नुहोस र सबैले सेयर गर्नुहोस !
सुन्तलाबाट सौन्दर्यता बनाउने तालीम सुरु !
युटुबेहरुले भाईरल चिया वालिलाइ बनायो मर्न बाध्य, बिगतको कुरा ल्याएर सक्काउन खोजियो !
पैसाकै लागि आफु भन्दा आधा उमेर कान्छा सञ्जय कपुरसँग बिबाह गरे पनि टिकेन !